लक्ष्य, कृपया चिकन सूट लक गर्नुहोस् Martech Zone
लक्ष्यका लागि खुला सन्देश:
कृपया हेलोवीनको बखत तपाईंको चिकनको सूटहरू खुला अवस्थामा नछाड्नुहोस्।
कृपया तपाईको कुखुराको सुटलाई एक गलौजमा नछोड्नुहोस् जहाँ कसैले यसलाई पहिचान नगरीकन राख्न सक्दछ।
कृपया तपाईंको चिकन सूट नछोड्नुहोस् जहाँ एक १ year बर्षे उमेरले यसमा हातहरू लिन सक्छ।
कृपया आफ्नो चिकन सूट नछोड्नुहोस् जहाँ बुबाले १ 17 वर्षको छोरालाई bet bet शर्त लगाउन सक्छन् चिकन सूटमा राख्न र सम्पूर्ण सुपर लक्ष्यको वरिपरि गोद लिन ...
सानो बच्चाहरूको चिल्लामा कराउँदै, "आमा ... हेर ... यो कुखुरा मान्छे हो!"।
कृपया चिकन सूटहरू राख्नुहोस्। जब सम्म तपाईं एक १ year बर्षको बुबाले कडा हँसाउन चाहानुहुन्छ भने ऊ मुटुको चोटपटकले मर्न सक्छ किनकि उसको छोरोले उसको चिकन सुइट हातहतियार फुलाउँदैछ र स्टोरको अगाडि दगुर्दै जान्छ।
लक्ष्य, चिकन सूट लक गर्नुहोस्।
उसले सायद मान्छे भन्दा राम्रो कुखुरा बनाए जो शहरमा कारपार्क बाहिर हरेक बिहान पर्चा प्रकाशित गर्दै खडा छ। हो - कुखुराको सूटमा लुगा।
म भोको छु
त्यो अद्भुत छ। यसका लागि भिडियो हुन सक्छ??!?!?! कृपया बिल गर्नुहोस्, भन्न कि तपाई यसका लागि भिडियो प्राप्त गर्न सक्षम हुनुभयो??!?!?!?!
के तपाईं एक माछा को सूट मा एक १teen वर्ष पुरानो बुबा हुनुहुन्छ जसले बच्चाहरूलाई हर्ष, डगलसको साथ हाँस्न बनाउनुभयो? त्यो सान्ता क्लज भन्दा राम्रो छ!
हो, म बुबा हुँ। त्यो मेरो छोरा थियो, बिल.
म यो हेर्न आनन्द थियो। मेरो जेठो केटो चिकन सूटको लागि तयार भइसकेको थियो, तर अरु दुई होइन।